युवराजबाट टाढा भइन् अनु, तर किन ? (भिडियो) « Ramailo छ
युवराजबाट टाढा भइन् अनु, तर किन ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति : May 28, 2018
समय : 6:24 pm
गायक तथा संगीतकार युवराज चौलागाईको नयाँ गीत ‘किन टाढा भयौ ‘सार्वजनिक भएको छ । युवराज चौलागाईकै स्वर तथा संगीतमा तयार पारिएको गीतले मायामा वियोग हुदाँको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । भिडियो हेर्नुस् :
विशाल भण्डारीको निर्देशन रहेको गीतमा युवराज र नायिका तथा मोडल अनु शाह फिचरिंग छन् । पुजा शाहको शब्द रहेको गीतमा राजन ईशानको एरेन्ज रहेको छ । युवराजले गाएका सेन्मिनेन्टल तिमीलाई क भनौं, हारें जस्ता गीतहरु सुपरहिट छन् ।